Wakambobatanidza mahedhifoni ako, ipapo unobva wawana meseji yacho Windows 10 haicherechedze mahedhifoni?
Dzivisa kumberi kwepanzvimbo jack kunoonekwa. Iyi ndiyo imwe yedzakareruka nzira dzekugadzirisa Windows 10 haigone kuchemerera nyaya.
Kana iwe uine mamwe matambudziko ekuterera, tarisa edu Gadzirisa Audio Zvinyorwa chikamu kuzvinetsa.
Iwe unayo chero nyaya necaptop yako kana PC? Huyai zvedu Laptop & PC Troubleshooting Hub.
Wakambobatanidza rako pamahedhifoni gadzirira kuenderana newaunofarira jam, kana muchivande ona bhaisikopo, wobva watora meseji Windows 10 haicherechedze mahedhifoni?
Zvinogona kushungurudza uye kutsamwisa. Nekudaro, kune dzakasiyana siyana mhinduro dzekugadzirisa nyaya yacho uye nekudzosera panzira.
Maitiro ekugadzirisa mahedhifoni asina kuzivikanwa mukati Windows 10
Solution 1: Dzivisa kumberi kwepanzvimbo jack kuonwa
Iyi ndiyo imwe yenzira dziri nyore dzekugadzirisa nadzo Windows 10 haigone kuchemerera nyaya.
Kana iwe uine Realtek software yakaiswa pakombuta yako kana palaptop, tevedza nhanho idzi kudzima musoro wefoni yaJack:
Kanda-kona pane kutanga bhatani
mhando Control Panel zvobva wadzvanya pinda kuti avhure
sarudza Hardware uye Sound
wana Realtek HD Audio Manager wobva wadzvanya pairi
Enda ku Connector kurongwa
Click Dzivisa kumberi kwepanzvimbo jack kunoonekwa kutarisa bhokisi
Edza pane yako mahedhifoni zvakare kuona kuti iyi mhinduro inoshanda kwauri here.
Kana zvichikanganisa kukonzeresa kwepanzvimbo jack kudhiraivha hakugadzirise iyo Windows 10 haigone kuchemura musoro, edza mhinduro inotevera.
Takambonyora zvakadzama nezve nyaya dzemusoro pamberi. Bhukumaka iri peji kana iwe uchizoida gare gare.
Solution 2: Chinja default dhiraivhu
Chimwe chikonzero nei mahedhifoni angave asingazivikanwe na Windows 10 chimiro chemanzwi. Kana izvi zvisina kuiswa nenzira kwayo, ipapo unogona kunge uine dambudziko rakafanana nekudzokorora.
Heano maitiro ekuenda nezve shanduko yekusanzwika yemhando:
Click Hardware uye Sound
pasi tambashure, wobva wadzvanya Default Mutambi Yekushandisa
Tumira ku enderera Tab
Chinja dhizaini rekusanzwisisika kubva kumenyu inodonhedza pasi
Edza kukwenenzvera mumusoro mako zvakare kutarisa kuti mhinduro iyi inogadzirisa here Windows 10 haigone kuchemerera nyaya.
Mhinduro 3: Isa musoro wefoni sedanho rekutamba yekutamba yekugadzirisa
Kana kuchinjisa chimiro chezwi rekusanzwisisika chisingashande iwe, edza kumisa yako musoro senge sedanho rekutamba rekushandisa uchishandisa matanho aya:
pasi Playback, tinya-kurudyi uye sarudza Ratidza Mano akaremara
Kubva pane iyo zvinyorwa zvemahedhifoni, tinya-kurudyi pazita rako remusoro wefoni
Click Isa seChina
Ukangotevedzera nhanho idzi dzese, unganidza mumusoro mako zvakare uye tarisa kana vachishanda.
Solution 4: Gadziridza odhiyo / mutyairi mutyairi
Iwe unogona kugadzirisa yako odhiyo / inonzwika mutyairi munzira mbiri:
Kushandisa chishandiso chinoshandiswa
Regai Windows otomatiki kugadzirisa mutyairi wako
Maitiro ekudzoreredza audio / mutyairi mutyairi uchishandisa zvekushandisa chombo
Dzimwe nguva nyaya inogona kukonzerwa neyechinyakare kana isingaenderani odhiyo kana mutyairi unonzwika.
Mune ino kesi, iwe unofanirwa kugadzirisa mutyairi nekushandisa chaiyo mutyairi kurodha, wobva wagadzirisa iyo chishandiso chishandiso iyo inogona kuongorora dhiraivha yako uye kutora imwe isina mhosva munguva pfupi.
Kana izvi zvangoitwa, chishandiso chombo chinobva chatorodha pasi uye nekuisa yakanyatso shanduro yekombuta yako.
Paunenge uchinge uchirodha pasi zvekushandisa zvekushandisa, tora matanho anotevera ekuvandudza yako audio / mutyairi mutyairi, uye gadzirisa iyo Windows 10 haigone kuchemerera nyaya:
Tarisa komputa yako nekutanga chishandiso chishandiso, wobva wadzvanya scan kuti uite scan yakazara
Chishandiso chinoshandiswa chinoburitsa rondedzero yeavo ese akasiya akasiya, haawirirani, akatyoka, akanganisa, kana arasika mutyairi kusanganisira mutyairi / mutyairi anonzwika
Gadziridza yako odhiyo / inonzwika mutyairi nekudzvanya gadzirisa kugadzirisa nyaya yacho. Chishandiso chako chekushandisa, panguva ino, chinozotora chinyorwa choga nekuisa mutambo wakanakisa weaudio yako / mutyairi wenzwi. Panguva ino, iwe unogona zvakare kugadzirisa mamwe ese madambudziko ekutyaira.
Rangarira kudzosera kumashure vatyairi vako usati waisa nyowani itsva kudzivirira chero kukuvara
Pakupedzisira, tangazve komputa yako kuti iite odhiyo / inonzwika mutyairi kuidzosera
Maitiro ekugadzirisa yako odhiyo / mutyairi wezwi nekutendera Windows otomatiki kugadzirisa mutyairi wako.
Tevedza nhanho idzi kuti uite izvi:
Enda ku Hardware uye Inzwi
Click on Inzwi
Enda kune Playback Tab
Sarudza yako mahedhifoni uye tinya pazvivakwa
Enda ku Anodzora Ruzivo wobva wadzvanya Properties bhatani
Click Chinja Zvirongwa (izvi zvinogona kuda mvumo yemutungamiriri)
Enda ku mutyairi Tab
sarudza Update Driver
Rega chigadzikiso chiitwe zvoga
Kana izvi zvangove zvakakwana, purura mumusoro mako kutarisa kana vachashanda.
Iri ratidziro richakubatsira iwe kuve nyanzvi pakugadzirisa madhiraivha akapfuura mukati Windows 10!
Gadzirisa madhiraivha otomatiki
Kurodha madhiraivha pamawoko maitiro anotakura njodzi yekuisa mutyairi asina kunaka kuiswa, ayo anogona kutungamira kune zvakakomba malfunctions.
Vatyairi vanogona kuzogadziridzwa mumabheji kana imwechete panguva, vasingadi kuti mushandisi aite chero sarudzo dzakaoma mukuita. Heano maitiro anoshanda:
Download uye dzishandise TweakBit Driver Dudziro
Paunenge wapedza scan, iwe unowana chirevo kune vese madhiraivha anotyaira akawanikwa paPC yako. Ongorora runyorwa uone kana iwe uchida kumutsiridza mutyairi mumwe nemumwe kana kuti zvese kamwechete. Kuti ugadzirise mutyairi panguva, tinya Dhizaina yedhiraivho padyo pazita remutyairi. Kana ingotinya Bhatani rese bhatani pazasi kuti uzvigadzike woga zvawo zvinokurudzirwa.
Cherechedza: Vamwe vatyairi vanofanirwa kuisirwa mumatanho akawanda saka uchafanira kurova bhatani rekuti 'Gadziridza' kakawanda kusvikira zvese zvaro zvakaiswa.
Iwe unogona zvakare kuedza imwe mutyairi yekugadzirisa software kubva pane yedu yakakura rondedzero!
Tinovimba kuti mhinduro idzi dzakakubatsira kugadzirisa Windows 10 haicherechedze kukanganisa kwemusoro.
Kana iwe wasangana nemamwe mhinduro yekugadzirisa dambudziko iri, unogona kunyora matanho ekugadzirisa mune zvakataurwa pazasi.
MIBVUNZO: Verenga zvakawanda nezvematambudziko emusoro pakombuta yako
Nei mahedhifoni angu asiri kushanda kana ndichiaburitsa?
Kana iyo headphone jack isiri kushanda mukati Windows 10, edza kudzima Front Panel Jack kuonekwa. Vhura Realtek HD odhiyo maneja muPaneru Panel. Wobva watarisa Dzivisa kumberi kwepanzvimbo jack kunoonekwa pasi pezvinhu zvinogadziriswa mukati mekurudyi-side pani.
Nei mahedhifoni anga asingashande palaptop yangu Windows 10?
Pamwe, komputa yako haigone kuona mahedhifoni. Ita shuwa kuti mahedhifoni akaiswa seyakagoneswa uye kuiswa seDhijitari Chokuita.
Nei musoro wangu usingashandi?
Tarisa mamiriro ekuteerera uye utangezve kifaa. Vhura kumusoro kwemaodha pane yako kifaa uye tarisa huwandu hwehuwandu uye chero humwe hurongwa hungasimudza ruzha.